ဒေါသူပုန် ထနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သီရိလင်္ကာပြည်ကြီးကို မွတ်စလင်များ အတွက် ငရဲဘုံအဖြစ် ဖန်တီးနေ - News @ M-Media
ဒေါသူပုန် ထနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သီရိလင်္ကာပြည်ကြီးကို မွတ်စလင်များ အတွက် ငရဲဘုံအဖြစ် ဖန်တီးနေ
in ဆောင်းပါး — August 27, 2013
သဂုတ်လ- ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၃
ဘာသာပြန်ဆို – မြင့်မိုရ်မောင်မောင်
မူရင်းဆောင်းပါးရှင်- Joseph Cox
သီရိလင်္ကာတွင် မွတ်စ်လင်မ်တို့ တိုက်ခိုက်ခံနေရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူရမ်းကားအုပ်စုများသည် လမ်းမများပေါ်ထွက်၍ မွတ်စ်လင်မ်တို့၏လုပ်ငန်းဌာနများ၊ ၀တ်ပြုနေရာများကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပြီး သွေးထွက်သံယိုများလည်းရှိခဲ့သည်ဟု လက်ရှိသတင်းများက ညွှန်ပြနေသည်။ မချက်ပြုတ်ရသေးသည့် ၀က်သားကို ဗလီဝတ်ကျောင်းများထဲ ပစ်သွင်းခြင်း၊ ဟလာလ်တံဆိပ်များကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း၊ အစိုးရဝေဖန်ရေး၌ထင်ရှားသူ အာဇဒ် စာလီအား ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များအနက် ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်လိုက်သည့် ကိစ္စမှာ သီရိလင်္ကာ၏အကြီးမားဆုံးမြို့ ကိုလံဘိုရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းတစ်ခုကို ဗုဒ္ဓဘာသာလူရမ်းကားတစ်စုမှ အဓမ္မပိတ်ပင်စေမှုအပေါ် အစိုးရကွန်မန်ဒိုများက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။ လူရမ်းကား ၄ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ထိုနေရာတစ်ဝိုက်ကို နေ၀င်မီးငြိမ်း ကာဖျူးအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
သီရိလင်္ကာတွင် မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ဘာသာရေးနှင့်ဟောပြောမှုလွတ်လပ်ခွင့်များမှာ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရကြောင်း အစ္စလာမ့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် All Ceylon Jamiyyathul Ulama မှ မော်လ၀ီ ဖဇိလ် ဖာရူးက် က (ဆောင်းပါးရှင်သို့) ပြောကြားသည်။ ၄င်းပြင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်အဖွဲ့အဖြစ် ကျော်ကြားနေသော (ဗုဒ္ဓဘာသာအင်အားစုတပ်ဖွဲ့ဟု အကြမ်းဖျင်းဘာသာပြန်ရမည့်) Bodu Bala Sena ဂိုဏ်းတည်ရှိရာအား ညွှန်ပြခဲ့သည်။ မွတ်စ်လင်မ်နှင့်ခရစ်ယာန်အုပ်စုများ၏ အန္တရာယ်အောက်သို့ရောက်နေသော ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုကို ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၄င်းတို့က ဆိုကြသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိလူဦးရေပမာဏအားလုံး၏ ၇၀ % မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်၍ မွတ်စ်လင်မ်နှင့်ခရစ်ယာန်တို့မှာကား ၁၀ % အောက်မှာသာရှိနေကြသည်။ သို့သော်လည်း မိမိ၏အဖွဲ့အစည်းသည် မည်သည့်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဟု Bodu Bala Sena ၏ CEO ဖြစ်သူ ဒီလန်သေး ၀ီသီနေ့ဂ်ျ (Dilanthe Withinage) က ဗြောင်ငြင်းခဲ့သည်။ ၄င်းနောက်တွင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် ကျယ်ပြန့်သွားရသည့်ဖြစ်အင်အပေါ်ကာကွယ်သည့်အားဖြင့် ၄င်းမှ ကျွန်ုပ်(ဆောင်းပါးရှင်)အား ဤသို့ ဖုန်းဖြင့် ပြောကြားသည်။
“ မနေ့ညက ကျွန်တော် ကိုလံဘိုမြို့ပြင် တစ်နေရာမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ(အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့) နေရာမှာရှိတဲ့ ၈၀ % နှုန်းသောလူတွေက မွတ်စ်လင်မ်တွေပါ။ သူတို့တွေ သွားလာစားသောက်မပျက်ကြပါဘူး။ ဒါက ပြဿနာကြီးတစ်ခုလို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး ”။
လက်တွေ့အခြေအနေတွင်မူ မွတ်စ်လင်မ်တို့မှာကား သီရိလင်္ကာ၌ စိုးတထိတ်ထိတ်ဖြင့် နေထိုင်စားသောက်နေကြရ၏။ သူတို့၏မျက်နှာထံ ၀က်သားဖတ်များဖြင့် တမင်သက်သက် ပစ်ပေါက်ခံရခြင်း စသည်တို့ကိုပင်လျှင် ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခွင့် မရကြချေ။
Bodu Bala Sena ဂိုဏ်း၏ အကြီးအကဲတစ်ဦး Dilanthe Withinage (၀ဲဖက်လူ)
နိုင်ငံတွင်းမွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဒုက္ခပေးချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သော ဟလာလ်တံဆိပ် ဟန့်တား ပိတ်ပင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Withinage က “ အဲ့ဒါက မွတ်စ်လင်မ်တွေ နှစ်သက်ခွင့် ရှိပါတယ် ” ဟု ဆိုသော်ငြား “ ဟလာလ်တံဆိပ်ဟာ အစ္စလာမ် နဲ့ မွတ်စ်လင်မ် အခြေခံမူတွေကို အားပေးအားမြှောက်ပြုဖို့ မွတ်စ်လင်မ်အဖွဲ့အစည်းတွေက အသုံးချတဲ့ အရာသာဖြစ်တယ်။ မီဒီယာတွေက အကြမ်းဖက်မှုလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ပျက်မှုအချို့ကတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သီရိလင်္ကာမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအကြားမှာ ကြီးကြီးမားမား ပဋိပက္ခဖြစ်နေတယ်လို့ မထင်မိပါဘူး ” ဟုလည်း တစ်ဖက်လှည့်ထောက်ပြခဲ့ပြန်သည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြုံဆုံမှု မရှိပါလျှင် ဘာသာရေးစော်ကား နှိပ်ကွက်မှု မဟုတ်လောက်ပါဟု အလွယ်တကူ ကောက်ချက်ချမိပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် အစ္စလာမ်အပေါ် တစ်ဖက်သတ် အမုန်းပွားရွံကြောက်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်ပေါင်း ၁၃၀ ထက်မနည်း မှတ်တမ်းတင် သုတေသနပြုပြီးမှ ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းမှတ်တမ်းတင်ချက်များ၌ မွတ်စ်လင်မ် လုပ်ငန်းရှင်များကို ပြန်ပေးဆွဲရန် ကြိုးပမ်းခြင်း၊ မွတ်စ်လင်မ်အိမ်များရှေ့တွင် ၀က်ခေါင်းများကို ချိတ်ဆွဲပြသခြင်း စသည်တို့လည်းပါဝင်သည်။ ထိုလုပ်ရပ်များက Bodu Bala Sena ဂိုဏ်း၏ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် တိုက်ရိုက် ပတ်သက်လျက်ရှိပေသည်။
သီရိလင်္ကာရှိ မွတ်စ်လင်မ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အကြား တင်းမာမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Bodu Bala Sena ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော Withinage ၏ အဆိုမှာ အဖြစ်မှန်နှင့်များစွာ ကွာဟနေသည်။
“ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့နောက်ထပ် ပစ်မှတ်ဟာ မိမိတို့ဘဲ ဖြစ်တော့မလား (လူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာမလား) ဆိုပြီး မွတ်စ်လင်မ်တွေ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို ပွင့်အံတော့မယ်လို့ သူတို့ထင်မြင်နေကြပါတယ် ” ဟု ဆိုသူကဆိုကြသည်။ ဤအနေအထားက တစ်သမတ်တည်းတော့ မဟုတ်ပေ။ ဗလီဝတ်ကျောင်းတစ်လုံးအား တိုက်ခိုက်ခံရစဉ်က ထိုဒေသရှိ မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ပြန်လည် ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Perera ဆိုသူမှ ကျွန်ုပ်အား ပြောပြခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်လျှင် အကြမ်းဖက်မှုအား အမှန်တကယ် ဖြစ်ပွားစေသည်မှာ အဘယ်အရာပါနည်း ? ဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှု လှိုင်းထခြင်း ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းမှန်က အဘယ်အရာပါနည်း ?
ဗုဒ္ဓတရားနှင့်ဆန့်ကျင်၍ (အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း) နှိပ်စက်စော်ကားကြသည့် လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားနေပါ၏။
၄င်းမှာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မကြေနပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဟု အချို့က ဆိုသည်။ မိမိရှာဖွေသလောက် အကျိုးမခံစားရသူတို့က ဖောဖောသီသီသုံးစွဲတတ်သည့် မွတ်စ်လင်မ်တို့အား အလွယ်တကူ ဓားစာခံပြုလုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြကြသည်။
သို့သော် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် တမီလ်ကျားအဖွဲ့အား အပြီးသတ်ဖြိုခွင်းသည့် သွေးချောင်းစီးပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူပေါင်းတစ်သိန်းမျှ သေကြေပျက်စီးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ လူများစုဖြစ်သော ဆင်ဟာလီလူမျိုးတို့အတွင်း အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးအမြင်က စိမ့်ဝင်ကြီးထွားလာသည်။
( ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးသမားတစ်ဦးက ဗလီတစ်ခုကို ဆေးမှုတ်ရေးခြစ်ရမ်းကားနေစဉ်)
“ ကိုလံဘိုက မွတ်စ်လင်မ်ဝတ်ကျောင်း တစ်ခုအပေါ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလထက်စာယင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစွန်းရောက်အမျိုးသားဝါဒီတွေ အဆမတန်ကြီးထွားလာတဲ့ လက္ခဏာာကို ပြသနေတာပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အတွေးထဲမှာ သီရိလင်္ကာကို ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်လို့ ထင်နေကြတယ်။ (ပြီးခဲ့တဲ့) စစ်ပွဲကို အနိုင်ရဖို့အတွက် အစိုးရက ဒီအမျိုးသားရေးဝါဒကို အသုံးချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အစိုးရက သူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက် ပျက်လို ဖျက်ဆီးဖြစ်ပွားစေတာမျိုးပါ ” ဟု Perera မှ ရှင်းလင်းသုံးသပ်ပြ၏။
အကြမ်းဖက်မှုများ ကျယ်ပြန့်လာလင့်ကစား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့မှ မဆိုစလောက်မျှသာ ဟန့်တားနေခြင်းက ဤအချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
“ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မွတ်စ်လမ်မ်တွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘာသာရေး တင်းမာမှုဖြစ်ပွားလာယင် အစိုးရအတွက် လွတ်လမ်းတစ်ခု တိုးတာပေါ့။ အစိုးရက သူတို့နောက်ကွယ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အင်အားစုအဖြစ်အသုံးချမှာဖြစ်လို့ ဟုတ်တိပတ်တိ တုန့်ပြန်အရေးယူမှာ မဟုတ်ဘူး ” ဟု ထိုသူကပင် ထပ်မံပြောပြလေသည်။
သီရိလင်္ကာဖြစ်ရပ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံမှပုံ ရိပ်များ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်လာပြီလောဟု စိုးရိမ်စရာ ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စ်လင်မ်များအပေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အကြမ်းဖက်မှုမှာ (တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အခြား မွတ်စ်လင်မ်များအထိ) ကြီးထွားကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ ရိုဟင်ဂျာအချို့သည် လှေငယ်များဖြင့် ပင်လယ်ဖြတ်စွန့်စားခဲ့ကြကုန်သည်။ “ မြန်မာအစိုးရကဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာတွေကဖြစ်စေ ဒီလိုရှေ့ဆက်မှုကို မရပ်တန့်ဘူးဆိုယင် အလ်ကိုင်ဒါရဲ့မိတ်ဖက် အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်တွေကို ဒီဒေသတွင်းထဲရောက်လာအောင် လက်ယပ်ဖိတ်ခေါ် နေရာရောက်ပါတယ် ” ဟု သမိုင်းပညာရှင်နှင့်စာရေးဆရာ ဂျပ်စ်တင် ၀င်းထဲလ်(Justin Wintle) မှ ပြောဆိုသည်။
“ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားနေဆဲဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံနေရတယ် ” ဟု HRW မှ Meenakshi Ganguly ကလည်း ကျွန်ုပ်အား ပြောပြသည်။
သီရိလင်္ကာမွတ်စ်လင်မ်များသည် မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်များထက်တော့ လုံခြုံမှုများစွာ ရှိနေပါသေးသည်။ ၄င်းတို့အဖို့ နိုင်ငံသားကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာဖြစ်လာရန်လည်း အကြောင်းမမြင်ပါ။ သို့ရာတွင် သီရိလင်္ကာ၌ မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး မှိုင်းတိုက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာလျှင် ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်မည်ကို မဆိုနိုင်သေးချေ။ Jehan Perera ထံမှရရှိသော အထောက်အထားများအရ အချို့က မွတ်စ်လင်မ်တို့အား နိုင်ငံ၏အရပ်ဒေသတစ်ခုသို့ တစ်ဦးမကျန် ထွက်ခွာသွားစေရန် လှုံ့ဆော်နေကြလေသည်။
“ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိ ထိခိုက်သေကြေမှုတွေနဲ့အတူ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီ ” ဟု Ganguly မှ ထပ်မံဆိုလိုက်သည်။
၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းအတွင်း သွေးမြေအကျဆုံးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် သီရိလင်္ကာရှိ စော်ကားမှုအခံရဆုံးမွတ်စ်လင်မ်တို့မှ ကြုံနေရသည့် အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် လက်တုန့်ပြန်လာခဲ့မည် ဆိုပါက အဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ရပ် ကြုံဆုံရပေတော့မည်။ သီရိလင်္ကာအစိုးရအနေနှင့် ဤပဋိပက္ခများကို ပြတ်သားစွာဖြင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း မစတင်ပါလျှင် နှစ်အနည်းငယ် သက်တမ်းမျှသာရှိသေးသော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုမှာ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် ပျက်သုဉ်းရခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မှ တွေ့မြင်ရတော့မည်ဖြစ်ပါ၏။
Joseph Cox ၏ Furious Buddhists Are Making Life Hell for Sri Lanka’s Muslims ဆောင်းပါးကို မြင့်မိုရ်မောင်မောင် မှ ဆီလျော်အောင် မြန်မာပြန်ဆိုရေးသားသည်။
Tags: Bodu Bala Sena, featrued, featured, Nationalism